China YF-2001 Simudza-Pamusoro Kofi Tafura Izvo Zvinokushamisa Iwe Mune Yakanyanya Nzira Inogoneka Mugadziri uye Mutengesi | Yifan
YF-2001 Simudza-Pamusoro Kofi Tafura Izvo Zvinokushamisa Iwe Mune Iyo Yakanyanya Nzira Inogoneka
Ichokwadi kuzita rayo, yedu yepakati-ezana ramakore-kufuridzirwa tafura yekofi ine pop-kumusoro kumusoro kuratidza yakavanzwa nzvimbo yekuchengetera. Kupera kwayo kweiyo walnut veneer kunowedzerwa nemashizha emarble kumusoro kune imwe nzvimbo yekuchengetera nzvimbo - yakakwana kumisikidza mabhuku panguva yekuungana kwako kunotevera.
Simudza pamusoro pekuchengetedza tafura yekofi inopa kuwanda kwesitayera uye kuchengetedza kwenzvimbo yako yemazuva ano yekugara. Musanganiswa waro wakangwara wezvinhu unowedzera kubata kwekudziya pamwe nechitarisiko chakatsetseka kukamuri yako yekushongedza neyakareruka huni zviyo uye glossy grey apedza. Tafura yese inosimudza kuratidza yakawanda nzvimbo yekuchengetera pazasi, yakakwana yekuviga kure remotes, coasters, kunyangwe zvigadzirwa zvemitambo. Musiyano wakakwana mumitsara yakakombama uye yakatwasuka
KUSVIRA TOP DESIGN: Iyo tafura yepamusoro inogona kusimudzwa kumusoro uye kumberi kuti igadzire nzvimbo yebasa, yepamusoro mhando inogonesa iyo tafura yekusimudzwa kumusoro kana kudzikisirwa pasi zvisina basa uye noiselessly; neiyi tafura yepamusoro yekusimudza tafura, haufanire kusendamira kumberi zvakanyanya kuti ushandise laptop yako, nyora kana kudya patafura uchizorora pasofa
SPACE SAVER: Chikamu chakavigwa pasi pepamusoro chakagadzirirwa kuchengetedza zvinhu zvako zvinowanzo shandiswa semagazini, laptop, chess, remote controllers, vatongi vemitambo zvichingodaro, vachizvichengeta zviri nyore uye zvisina tsvina; pasherufu yakavhurika yepasi inogona kubata magumbeze, tudyo kana knick-knacks
SOLID & STABLE: Iyi tafura yekofi inogadzirwa yemhando yepamusoro P2 inoenderana MDF nesimbi mashini, yakasimba uye yakagadzika dhizaini haizodzedzere uye inokwanisa kubata 68 kg / 150 lb yakazara
MINIMALIST STYLE: Iyi tafura yemazuva ano uye yemazuva ano yakapusa chimiro uye chic muvara, inogona kunyatsoenderana nekamuri yako dhizaini uye kushongedza; tafura inoshanda uye yakanaka yekofi munzvimbo diki, inoshanda mushe yekutandarira uye muhofisi
Ungano isina kunetsekana: Inouya neese anodikanwa Hardware uye ine mifananidzo yekuraira bhuku rekukubatsira iwe kumisikidza iyi yekusimudza yepamusoro tafura yekofi nekukurumidza uye pasina matambudziko.
Pashure: YF-H-907 yeganda yekutandarira seti
Chinogadziriswa Kofi Tafura
Kofi Tafura Ine Inogadziriswa Simudza-Pamusoro
Simudza -Pamusoro Kofi Tafura
Huzhinji hweMabasa eKofi Tafura